Ukuqonda i-Series LLC / Inkampani Yezimali Ekhawulelwe Imishini
Ukuqonda i-Series LLC
Yini i-Series LLC?
A uchungechunge LLC yinkampani enesikweletu esilinganiselwe lapho uchungechunge ngalunye lusebenza njenge-LLC ehlukile ngezinjongo zokuvikela isikweletu. Kuyafana nekhabethe elilodwa elinezimbobo eziningi ze-cubby. Icala lokuphikisana nochungechunge oluthile alithinti elinye. Abatshalizimali bezakhiwo bahlala basebenzise zona ukuze uchungechunge ngalunye lube nepropathi ehlukile. Icala kwesinye sezakhiwo, ngokwesibonelo, alivezi ezinye.
Kwakhiwa nje nge-LLC ejwayelekile, ngaphandle kokuthi imibhalo yayo yokwakheka kufanele isho ngokuqondile ukuthi igunyaziwe ukwenza uchungechunge. I-LLC yokuqala kwesinye isikhathi ibizwa ngokuthi yi-master LLC, base LLC, isambulela, noma i-mzali LLC. Uchungechunge olwenziwayo lungahamba nangamagama ahlukile. Kukhulunywe ngabo embonini njengamaseli, iziqukathi, ukwahlukana, izinkampani ezingaphansi, noma amayunithi. Lapho sekuqaliwe ukwenziwa kwe-master yokuqala, kungadala uchungechunge olwengeziwe lapho kuvela isidingo.
Iqale ukusungulwa eDelaware e1996, i-Series LLC (SLLC), njengoba kusaziwa, iyaziwa kancane ithuluzi lokuvikela impahla. Ambalwa kuphela amazwe athi ngaphandle kweDelaware avumela ukumiswa ngokusemthethweni kwama-SLLC ngaphakathi komthetho wawo. Lezi yilezi: i-Alabama, i-Illinois, i-Iowa, ne-Kansas, neMissouri, i-Montana, i-Nevada, i-Oklahoma, i-Tennessee, iTexas, i-Utah, kanye ne-District of Washington. I-California inesimo esisodwa esiqondene neSLLC. Alunayo ilungiselelo lokusungulwa kochungechunge lwama-LLC.
Kodwa-ke, ivumela ama-SLLC akheke kwelinye izwe ukuthi asebenze kanjena eCalifornia, inqobo nje uma ebhalisa embusweni njengenhlangano yakwamanye amazwe. Yize uchungechunge lwe-LLC lufana nokusungula izinkampani eziningi, lunikeza ngesakhiwo esivame ukubiza kakhulu ukusetha futhi kube lula ukuphatha. Njenganoma yiliphi ithuluzi lokuvikela impahla, i-SLLC inezinzuzo nobubi. Kungakuhle njalo uhlole izinketho ezahlukene zesimo sakho sebhizinisi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokugcina.
The master LLC yakha isivumelwano sokusebenza esisungula imithetho yokusebenza komhlaba yechungechunge. Kodwa-ke, lesi sivumelwano sokusebenza sivumela uchungechunge ngalunye ukudala imithetho eyenziwe ngokwezifiso yemisebenzi yayo ethile. I-master LLC iyadingeka ukufaka imibhalo yezakhiwo kanye nje. Uchungechunge ngalunye olwengeziwe ngemuva kwalokho luzokwakhiwa ngezinqubo zangaphakathi ezichazwe kusivumelwano sokusebenza, noma ukuhlukanisa imidwebo yomphakathi, ngokuya ngomthetho.
Uchungechunge ngalunye lusebenza njengenhlangano ehlukile enegama layo, ama-akhawunti asebhange, nezincwadi zokubalwa kwamabhuku namarekhodi. Bangaba namalungu nabaphathi abahlukile, amalungelo abo nezibopho zabo ziyehlukahluka kusuka ochungechungeni kuya ochungechungeni. Uchungechunge ngalunye lungaqhuba ibhizinisi lalo kubandakanya ukufaka izinkontileka kanye nokubamba izihloko ezakhiweni. Impahla ephethwe nguchungechunge ngalunye ihlukile futhi ihlukanisiwe empahleni ephethwe ngolunye uchungechunge ngaphansi kwe-master LLC efanayo. Ngenxa yalokhu, uchungechunge ngalunye luvikelwe ezikweletini ezingase zitholwe olunye uchungechunge. I-LLC yochungechunge inikela ngokuvikelwa kwesibopho sempahla esihle ngaphandle kwezindleko eziphansi kunokusetha i-LLC ehlukile yempahla ngayinye.
Uchungechunge LLC vs. Holding Company
Ngaphambi kokudalwa kochungechunge lwama-LLC, amabhizinisi ayevame ukusebenzisa izinkampani zokubamba ukuhlukanisa impahla nokukhawulela izikweletu. Lokhu kudinga ukwakhiwa kwama-LLC amaningi. I-LLC ngayinye yayinesethi ehlukile noma ukuhlukaniswa kwempahla, okuhlukile kuzimpahla ezigcinwe kwenye i-LLC. I-LLC ngayinye izophinda ibhekane nanoma yisiphi isikweletu esingasithola. Lawa ma-MDA ngamanye ayezobekwa ngaphansi kwenkampani ephethe. A inkampani yokubamba ayizibandakanyi ebhizinisini. Njengoba igama laso libonisa, imane ibambe okuthile — njengomhlaba, izindlu, noma izimoto. Kulokhu, iphethe iqembu lama-LLCs ukuthi ngalinye liba nempahla ethile. Njalo lapho umnikazi webhizinisi efuna ukubeka impahla ngaphansi kwenkampani ephethe, kufanele kwenziwe i-LLC ehlukile.
I-LLC uchungechunge luyisakhiwo esisebenza kangcono. Kudinga ukusethwa kwe-master eyodwa ye-LLC esikhundleni sama-MDS ambalwa. Kwezinye izifundazwe eziqaphela ama-LLCs ochungechunge, yi-master LLC kuphela edingekayo ukufaka isitifiketi sokwakhiwa nemibiko yonyaka. Kwezinye izimo, njengaseTexas, yi-master kuphela edingekayo ukufaka amafomu entela.
Ngaphezu kwalokho, ngokungafani nenkampani ephethe, i-master Admin ingenza ibhizinisi layo futhi ikhiphe imali. Kungasiza ngisho nokuqondisa ukukhula kochungechunge ngalunye ngaphansi kwesambulela salo ngokwemibandela yesivumelwano sokusebenza.
Izinzuzo ze-Series LLC?
Njengoba kuboniswe ngenhla, inzuzo ecacile yochungechunge lwe-LLC amandla ayo okuvikela impahla yechungechunge ngalinye kusuka kwizikweletu zolunye uchungechunge, noma ngisho nakwizikweletu ze-master LLC uqobo. Kukhona i-caveat mayelana nale nzuzo nakuba. Abaphathi be-Series LLC kumele banakekele ukugcina uchungechunge ngalunye luhlukile futhi luhlukile kolunye uchungechunge ngaphansi kwe-master LLC. Izindleko zokuphatha nemisebenzi zingabiwa ochungechungeni, kepha hhayi amarekhodi okubalwa kwemali, ama-akhawunti asebhange, noma amanye amadokhumenti afanayo. Ukwenza lokhu kuzokwenza ukuthi udonga lwesibopho phakathi kochungechunge kube lula ukwephula inselelo yezomthetho.
Enye inzuzo ye-SLLC ukuguquguquka kwayo okumangalisayo. Uchungechunge ngaphakathi kwe-master LLC lungaba namalungu alo, inhloso, kanye nezinjongo zokuphepha. Ingaba ngumnikazi, ithole, noma ithengise ngempahla ehlukahlukene ebonakalayo nengaphatheki, kufaka phakathi amalungelo obunikazi nempahla yengqondo. Izimpahla eziwuchungechunge zingabanjwa egameni lomunye wuchungechunge noma egameni le-master LLC. Umuntu angakhetha umphathi ophakanyiselwe ubumfihlo. Ngaphezu kwalokho, abadali be-master LLC bajabulela inkululeko ecishe ibe ephelele yesivumelwano ekwenzeni izivumelwano zokusebenza kwabo. Ngakho-ke, i-LLC ewuchungechunge ingaba, ngaphakathi kwemingcele yezomthetho, ibe yodwana futhi ihlukile njengoba abadali bayo bengacabanga ukuthi yikho.
Ngokuya kwezintela kanye nokuhleleka, okufana nokugcina amarekhodi ezinkampani, uchungechunge lwe-LLC lunesakhiwo esiyinkimbinkimbi kakhulu kunenhlangano enezinkampani ezingaphansi kwayo. Ngenxa yalokhu, kulula ukuqhuba nokuphatha. Kwezinye izifundazwe, intela lapho uchungechunge olukhokha olunye uchungechunge ngaphakathi kwe-master LLC efanayo ingakhishwa intela. Futhi, inqobo nje uma amarekhodi anjengama-accounting nama-akhawunti asebhange egcinwa ngokuhlukile, uchungechunge lungaphathwa ngokudibeneyo, okungaholela ekutheni longezwe.
Okubi kwe-Series LLCs
Yize kunezinzuzo zako, umuntu angahle azibuze ukuthi kungani ama-LLC ama-Series abonwa emazweni ambalwa kuphela. Ukudonswa okukhulu okukodwa kwechungechunge le-LLC kulele emithethweni engagunyaziwe engokomthetho yesakhiwo sayo esingokwemvelo. Ukuba yithuluzi elisha elihlobene, ayinayo umlando omude wokufaka icala. Amandla wezici zayo zokuvikela isikweletu awakahlolwa kakhulu futhi atholakala ngokusebenza njalo ngaphakathi kohlelo lwezomthetho lwaseMelika. Akuzange kube namacala anele afakwe enkantolo anikeza izimpendulo (izinqumo zomthetho) kwimibuzo eyisisekelo nokukhathazeka. Isibonelo, ingabe inkantolo ezweni elingelona uchungechunge lwe-LLC iyokwamukela ukwehlukaniswa kwesikweletu phakathi kochungechunge ngaphansi kwe-master Admin efanayo? Azikho izandiso zomthetho ezanele okufanele ziqhubeke.
Ngokungeziwe, izifundazwe eziqaphela ukwakheka kwe-SLLC zikhombisa amazinga ahlukahlukene wemithetho elawula ithuluzi. Ezinye izifundazwe, ezinjenge-Illinois, zidinga ukuthi abadali be-LLC abalandelayo bahambisane nesethi yemithetho eqinile. Ezinye izifundazwe, njengoDelaware, zilandela inqubo eqinile yokwakhiwa. Uma sinikezwe ukwahlukahlukana, ingabe izwe elinochungechunge olunamandla kakhulu lokusetha i-LLC lingakubona ukuthembeka kochungechunge lwe-LLC olwenziwe ezweni olungahambelani nesethi efanayo yemithetho? Okwamanje, impendulo ayikacaci.
Kukhona futhi ukungaqiniseki okuphathelene nochungechunge lwama-LLCs enkundleni yezentela. Abeluleki bezentela okwamanje abazi ukuthi bazophathwa kanjani besuka komunye umbuso baye kolunye ngezinhloso zentela. Ngakho-ke, abaningi bahlala beqaphele ukuncoma ama-LLCs amaklayenti abo. I-IRS futhi ayikakhipha eminye imithetho eqondile kuma-SLLC. Kuze kube yilapho kwenzeka, uchungechunge lwama-LLCs luzohlala lusetshenziswa kuphela ngabanesibindi nabangesabi abazosebenzisa. Alikho ibhizinisi noma umnikazi wefa ofuna ukubanjwa ezinyaweni ze-IRS. Kuze kuthi izifundazwe ne-IRS zisebenzise ukuqondiswa okucacile kwentela mayelana nochungechunge lwama-LLC, ochwepheshe bezentela bazoqhubeka nokubamba leli thuluzi ubude bengalo.
Abadali be-Series LLC bangahlangana nenani elithile lokumelana kusuka emabhange lapho bevula ama-akhawunti ochungechunge oluhlukile ngaphansi kwe-master LLC. Ambalwa amabhange noma iminyango yawo yezomthetho ejwayelekile ekusebenzeni kwangaphakathi kochungechunge lwama-LLC. Ngenxa yalokhu, bangaphoqa izidingo ezingeziwe noma imibhalo eqinile evela kubadali beSLLC. Ukuthola imalimboleko yochungechunge kungahle kube nzima futhi kube yisicefe ngesizathu esifanayo.
Ama-Series LLCs amathuluzi awusizo. Banikela ngokuvikelwa kwempahla, banesakhiwo esilula nokho esisebenzayo, futhi bavumelana nezimo ngokweqile. Banikeza abadali namalungu izinketho eziningi zokufinyelela, ukukhula, nokuvikela izintshisekelo zabo. Uchungechunge olulodwa lwe-LLC lungaveza izinzuzo ezifanayo njengama-LLC amaningi ngaphansi kwenkampani ephethe. Ngoba ama-LLCs asesebenzisa amathuluzi amasha, kodwa, asengakaqinisekiswa enkundleni yezomthetho. Lesi ngesinye sezihibe zayo eziphambili. Ngokwengeziwe, asikho isiqondisi esicacile sentela esikhishwe ngama-IRS noma ohulumeni bezwe maqondana nama-SLLCs kuze kube manje. Lokhu kwenza abeluleki bezentela baqaphele ukubancoma kumakhasimende abo. Ngokwengxenye enkulu, uchungechunge lwe-LLC luhlala luyindawo engafakwanga ezweni lokuvikelwa kwempahla. Iseluleko esihle kakhulu-ke, kungaba ukuqhubeka ngokuqapha kanye nokufuna ukuholwa yisazi emkhakheni.